यो वर्ष आउने आईफोन १२ कस्तो हुनेछ ? – Aarthik Dainik
१२ फागुन २०७६, सोमबार
अन्तर्राष्ट्रिय Posted on ३ माघ २०७६, शुक्रबार १५:०८
यो वर्ष आउने आईफोन १२ कस्तो हुनेछ ?
युरोप, माघ ३
स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी एप्पलको अर्को स्मार्टफोन आईफोन १२ फाइभजी इन्टरनेट र भाँच्न मिल्ने प्रकृतिको हुने सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञले अनुमान गरेका छन् । आगामी सेप्टेम्बरमा बहुप्रतीक्षित फोन सार्वजनिक हुँदै छ । विज्ञहरुका अनुसार उक्त आईफोन अहिलेसम्मकै उच्च प्रविधियुक्त हुनेछ ।
नयाँ फोनले आईफोन ११ लाई विस्थापन गर्ने अनुमान गरिएको छ । द सनका अनुसार विज्ञहरुले एप्पलको गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् । सीसीएस इन्साइटका बेन वुडले सुपर साइकलका रुपमा आफूहरुले उक्त फोनलाई लिएको बताए । उनले भने, ‘फाइभजी प्रविधि नयाँ आईफोनमा उपलब्ध हुनेछ ।’ हाल विश्वका अधिकांश मोबाइल निर्माताले फाइभजी फोन उत्पादन सुरु गरिसकेका छन् । एप्पलका प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरु सामसुङ, हुवावे र वानप्लसले यसअघि नै फाइभजी फोन ल्याइसकेका छन् । तर आईफोनले भने यो वर्षको अन्त्यतिरमात्रै फाइभजी मैत्री चिप्सहरु प्रयोग गर्नेछ ।
नयाँ आईफोनलाई लिएर विश्लेषकहरुले चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन् । खासगरी नयाँ र फरक किसिमको फाइभजी इन्टरनेटमत्रै फोन आयो भने यसले आईफोनलाई महंगो बनाउनेमा उनीहरुको चिन्ता रहेको छ । पीपी फोरसाइटका विश्लेषक पाउलो पेस्काटोरले नयाँ आईफोनले फाइभजीलाई ग्रहण गर्नेमा निश्चिन्त रहेको बताउँदै भने, ‘फाइभजीरहित आईफोन आयो भने आश्चर्य हुनेछ ।’
उनका अनुसार नयाँ आईफोनले सब ६ गिगाहर्ज र एमएमवेभ सपोर्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने मुख्य प्रश्न हो । त्यस्तै नयाँ आईफोनमा अहिलेभन्दा राम्रो प्रोसेसर हुने पाउलोको अनुमान छ । यसबाहेक धेरै स्टोरेज र उच्च सुधारयुक्त क्यामेरा हुनेमा पाउलो विश्वस्त छन् । त्यस्तै पाउलोले नयाँ आईफोन भाँच्न मिल्ने आउन सक्ने पनि बताए । भाँच्न मिल्ने फोनमा सामसुङ र हुवावेले पनि उत्तिकै चासो दिएका छन् ।
विज्ञहरुका अनुसार खासगरी एप्पलले यसै वर्ष वा नभए अर्को वर्ष यस किसिमको फोन सार्वजनिक गर्न सक्नेछ । फोल्डेबल अर्थात् भाँच्न सकिने फोन सर्वाधिक लोकप्रिय डिजाइनमा पर्ने भएकाले पनि एप्पलले त्यसलाई नबिर्सिने अनुमान गरिएको छ । फोल्डेबल स्मार्टफोनमा डिस्प्ले ठूलो हुन्छ । सामसुङले गत वर्ष ग्यालेक्सी फोल्ड सार्वजनिक गरे पनि तत्कालै रद्द गरेको थियो । टुटफुटको समस्याको कारण कम्पनीले केही दिनमै फोल्डेबल फोन रद्द गरेको थियो । हुवावेले पनि फोल्डेबल मेट एक्स लन्चमा ढिलाइ गरेको थियो ।
डिजाइनमा समस्याका कारण कम्पनीले भाँच्न मिल्ने फोन ल्याउन ढिलाइ गरेको थियो । एप्पलले भने यससम्बन्धी योजना हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । यस्तै सामसुङले केही दिनमै विश्वको पहिलो फाइभजी ट्याब्लेटबारे जानकारी दिने अनुमान गरिएको छ । तर एप्पलको आगामी फोन अहिलेसम्मकै पातलो हुन सक्ने पनि बताइएको छ ।
के हो फाइभजी ? फाइभजी भनेको पाँचौँ पुस्ताको इन्टरनेट प्रविधि हो । यो सामान्यतया मोबाइल फोन नेटवर्कको अर्को भर्सन हो । नेटवर्क अपरेटरले फोनमा नयाँ तरिकाबाट इन्टरनेट प्रदान गर्न सक्छन् । साथै फाइभजीमार्फत द्रुततर गतिमा डाउनलोड गर्न सकिन्छ । हाल विश्वका केही नेटवर्क सेवाप्रदायकले यस्तो प्रविधि भित्र्याइसकेका पनि छन् । फाइभजी चलाउन आफ्नो फोनले फाइभजी सपोर्ट भने गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अष्ट्रेलियाको आगलागी भएको क्षेत्रमा वर्षा
एफडीआईसम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याउने तयारीमा भारत
७ फाल्गुन २०७६, बुधबार ११:१६
एचएसबीसी बैंकले ३५ हजार रोजगारी कटौती गर्ने
१९ माघ २०७६, आईतवार १६:००
सामसुङको फाइभजी ग्यालेक्सी ट्याब्लेट सार्वजनिक
२२ माघ २०७६, बुधबार १३:१७
‘भारतका लागि एस–४०० प्रतिरक्षा प्रणाली निर्माण सुरु’
८ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १५:३५
दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति भ्रष्टाचारी ठहर
८ पुष २०७६, मंगलवार १२:३५
जीडीपी वृद्धिदर घटेको रिपोर्टपछि मोदीले छलफल थाले
२ माघ २०७६, बिहीबार १४:४०
अमेरिका र चीनबीच पहिलो व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर
६ पुष २०७६, आईतवार १५:२३
बजेट कार्यक्रमको अनुगमन र नागरिक समाज
११ फाल्गुन २०७६, आईतवार १५:५९
एभरेष्ट बैंक र हेफर इन्टरनेशनल नेपालबीच सम्झौता
११ फाल्गुन २०७६, आईतवार १५:५३
एनएमबी बैंक र चेपेखोला साना जलविद्युत् आयोजनाबीच सम्झौता
११ फाल्गुन २०७६, आईतवार १५:४२
मेरो माइक्रोफाइनान्सका कर्मचारीलाई तालिम
११ फाल्गुन २०७६, आईतवार १५:३५
कामना सेवा विकास बैंकको ऐतिहासिक जित
११ फाल्गुन २०७६, आईतवार १५:३१
मेट लाइफद्वारा काभ्रेमा पुनर्निर्माणका लागि सहयोग
किसानको आर्य–आर्जनमा जुनेलो खेती | Bishow Nath Kharel :
[…] Posted on January 23, 2020 by bishownath ...
Setodewal Marg, Kupondole, LalitpurTel : +977-1-5554236